पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनवरी देखि संचालन हुने, खाडीका यी देशबाट हुनेछ सिधा उडान ! – Online Khabar 24
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनवरी देखि संचालन हुने, खाडीका यी देशबाट हुनेछ सिधा उडान !
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आगामी जनवरी १ देखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी थालिएको छ ।
विमानस्थल स्थानान्तरण तथा सञ्चालन तयारी गर्न गठित कार्यदलले नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणलाई जनवरी १ देखि नै उडान खुला गर्न सिफारिस गरेको कार्यदलका संयोजक विक्रम गौतमले जानकारी दिए ।
शुरुमा आन्तरिक उडानमात्रै शुरु गर्ने र वैशाखपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी कार्यदलले सिफारिस गरेको पोखरा विमानस्थलका प्रमुखसमेत रहेका गौतमले बताए । अबको तीन महिनाभित्रै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने गरी महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको समेत उनले बताए ।
‘सन् २०२२ को जनवरी १ देखि उडान सुरु गर्न सिफारिस गरेको छु । त्यतिबेला कम्तिमा आन्तरिक उडान यो विमानस्थलबाट सञ्चालन हुनपर्छ’ गौतमले भने ।
बुधबार पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल अवलोकनका लागि गएका गण्डकी प्रदेश मुख्य मन्त्री सहितको टोलीलाई संयोजक गौतमले आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने र त्यसको एक वर्षभित्र बाह्य उडान पनि शुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् । ‘आशा छ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै सुरक्षा र सुविधासहितको व्यवस्थापन गरेर नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने छौं,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उडानका लागि अहिले पूर्वी भागको रिठ्ठेपानी डाँडा मुख्य समस्याको रुपमा रहेको आयोजनाको भनाइ छ । उक्त डाँडा कटानका लागि नापी कार्यालय र वन कार्यालयले रुखको लगत तयार नगरिदिँदा डाँडा कटान हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, पोखरा महानगरले निर्माणाधिन विमानस्थल नजिकै रहेको स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको विकल्प नखोज्दा भविष्यमा उडानमा ‘बर्ड हाजार्ड’ हुने आयोजनाले चेतावनी दिँदै आएको छ ।
विमानस्थल ‘सेफ्टी, सेक्युरिटी र फेसिलिटी’ तीन वटा कुरालाई ध्यानमा राखेर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने उनले सुनाए ।
विमानस्थल सञ्चालनका लागि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका संस्थासँग निरन्तर छलफलमा रहेको गौतमले बताए । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलबाट उडान भर्ने हवाई यात्रालाई छोटो र सस्तो बनाउन आफूहरुले ‘एअररुट’को अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
आईकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन) को मापदण्ड अनुसार विमानस्थल बनिरहेको उनले बताए । ११ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने उक्त विमानस्थलमा ‘न्यारो बडी’ जहाजले उडान भर्न सक्नेछ । ‘लामो दूरीका जहाजहरु इन्धनका कारण आउन नसक्ने हुन् । त्यसबाहेक मध्यम दूरीका जहाजहरु यहाँ आउन कुनै समस्या छैन’ गौमतले भने ।
विमानस्थलबाट दैनिक आन्तरिक ४८ र अन्तर्राष्ट्रिय ६ वटा उडान गर्ने गरी नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको तयारी रहेको उनले सुनाए । २०१७ नोभेम्बर १ देखि चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईले बनाइरहेको विमानस्थलको हाल ८४ प्रतिशत काम सकिएको विमानस्थल प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिए ।
सन् २०२१ जुलाई १० मा सक्ने लक्ष्य भए पनि अहिले थप एक वर्ष म्याद थपिएको छ । ‘डिसेम्बरसम्म सबै निर्माण सामग्री आइसक्ने ठेकेदार कम्पनीले भनेको छ । त्यसपछि काम सजिलो हुन्छ,’ भने ।
हाल विमास्थलमा १ सय ८५ चिनियाँसहित ४ सय १५ जना कामदारले काम गरिरहेका छन् । पहिलो लकडाउनपछि पनि ७ सय बढी कामदार रहेकोमा दोस्रो चरणको महामारीपछि भने कामदार घटेको मुनकर्मीले जानकारी दिए । चीन सरकारको २२ अर्ब सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेको विमानस्थलमा हालसम्म ६८ प्रतिशत वित्तीय खर्च भइसकेको उनले सुनाए । अनलाइन खबर बाट
Prevझरनामा नुहाउने क्रममा चि’प्लिएर युवकको मृ’ त्यु !
nextभाई पक्राउ परेपछि शाहरुखकी छोरी सुहानाले चालिन् कसैले नसोचेको कदम, सबै चकित !